ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuator
ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့mတွင်ion.ကျွန်တော်တို့ ပေး လျှပ်စစ် actuaသို့rs ဘို့ အဆောက်အဦးများ, အပင်များ, steelworks, powerအပင်များ,etc. AOX ကွပ်မျက် အေဂျင်စီများ များမှာ ရရှိနိုင် သို့ နောက်ထပ် ထက် 30 နိုင်ငံပေါင်း။ ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ထုတ်လုပ် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ကွပ်မျက် AOX-R ကို ကို စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r တွင် အနိမ့် စီးပွားရေး စျေးနှုန်းများ ဘို့ အဆိုပါ အကျိုး ၏ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers. ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကျွန်တော်တို့၏ dဖြစ်tribuသို့rs နှင့် cusသို့mers နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု။
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ကိုစီးရီး၏ shell ကိုအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
2. Relaible ဂီယာ: Gear ကိုအထူးပစ္စည်းများကိုမြင့်နှင့်ပိုပြီးအစိုင်အခဲများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြ၏။
3. နယူးစက်မှုအနေအထားကိုညွှန်ပြချက်: AOX-R ကိုစီးရီးသစ်တံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းပုံဟာပြင်ပအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏အသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator တွေ့ကြံလိုအပ်ချက်နှင့်ရေကိုရှောင်ကြဉ်။
4. ရွေ့ပြောင်းဒီဇိုင်း: လျှပ်စစ် actuators အမြဲတမ်းထုတ်ကုန်များ modular ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသော angular လေဖြတ်စီးရီး။ အဆိုပါပိုမိုစုံလင်လာအစိတ်အပိုင်းများထုတ်ကုန်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီစုဝေးနှင့်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်နိုင်သေချာစေ။ AOX-R ကိုစီးရီး၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator ကြားရှိရွှေခရီးထွက် connector ကို interface ကိုထုတ်ကုန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသိဉာဏ် module တစ်ခုမြင့်မားပေါင်းစည်းမှုနှင့် single-chip ကို microcomputer နဲ့့ Analog circuit ကို၏အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ချမှတ်။
AOX ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကိုအလွန်အရေးပါမှုကိုအလေးထားမှာ, နှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏ခိုင်ခံ့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ AOX ပြည့်စုံဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးနှင့် AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator အဘို့များစွာသောနည်းပညာဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
1 ရှိပါတယ်ကောင်းသောညှိနှိုင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာဖို့ AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator နှင့်ညှိနှိုင်းမှုယန္တရားအပေါငျးတို့သအဆစ်မှာအဘယ်သူမျှမဖြည်ရှင်းလင်းရေးဖြစ်သင့်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုမူလီအညီအမျှနဲ့အချိုးကျတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်ရပါမည်။
ဂရုတစိုက်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကိုဖတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးနှင့်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးရေးနည်းလမ်းအရသိရသည်အတည်ပြုရန်, အ AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator ကိုသုံးပြီးခင်မှာ3။ လျှပ်စစ် actuator စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်မီ, ထို site မှာ power supply ဗို့အားအဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ဝါယာကြိုးပုံမှအတိုင်းဝါယာကြိုးစစ်ဆေးပါ။ ဝါယာကြိုးများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ Terminal ကို၏ဝါယာကြိုးမြဲမြံစွာဖြစ်သင့်အခါဝါယာကြိုးအရေအတွက်အာရုံစိုက်။
ဖြေကျနော်တို့ Manufactory, Ruian, Zhejiang ပြည်နယ်အတွက်, AOX-R ကိုစီးရီးအတွက်တရုတ်အနှစ် 20 ကျော်အဘို့အအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator အထူးပြုနေကြသည်။
မေး: AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ် rotary လျှပ်စစ် actuator မှာဘယ်လိုနေသလဲ?
hot Tags:: ဉာဏ်ကောင်းသော rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်